Kheyre oo la kulmay Safiirka Uk u qaabilsan Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa la kulmay Safiirka Uk u qaabilsan Soomaaliya David William Concar,waxayna kullankooda uga hadleen xoojinta xiriirka Taariikhiga ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Ingiriiska iyo horumarinta iskashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha.
Safiirka Dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Mr. Concar ayaa Dowladda Soomaaliya ku bogaadiyey horumaradda ay ka samaysay dhanka Dowladda wanaagga, la dagaalanka musuq maasuqa iyo Sugida amniga .
Dhanaca kale, Ra’iisul wasaare Khayre ayaa xafiiskisa isla maanta kulan kula yeeshay xubno ka socday Midowga Yurub,kaasi oo looga hadlay horumarinta iskaashiga ka dhaxeeya Midowga Yurub iyo Soomaaliya ee ku aadan Dar-dar galinta mashaariicda horumarineed ee ay Soomaaliya ka wadaan.
AKHRISO:-Qorshayaashiisa Cusub Madaxweynaha DDSI